Douglas Karr | Peji 2 pamusoro 539 | Muvambi we Martech Zone
Chipiri, May 25, 2021 Chipiri, May 25, 2021 Douglas Karr
Makore apfuura, ini ndanga ndaendesa yangu yekushambadzira michina kune inozivikanwa chaizvo uye inozivikanwa yakagamuchirwa chikuva (kwete Salesforce). Chikwata changu chakagadzira nekugadzira mishandirapamwe yekurera uye takanga tichinyatso kutanga kutyaira huru yekutungamira… kusvika njodzi yaitika. Iyo chikuva chaive chichiita chikuru kusimudzira uye netsaona yakadzima akati wandei data revatengi, kusanganisira neyedu. Ipo iyo kambani yaive nechibvumirano cheyero yebasa (SLA) iyo yaivimbisa nguva yekukwira, yanga isina backup
Aya mashoma apfuura makore anga achifadza kwazvo kune vezvemabhizimusi kana makambani ari kutsvaga kuvaka ecommerce bhizinesi. Makumi gumi apfuura, kuvhura ecommerce chikuva, kubatanidza yako yekubhadhara mashandisirwo, kuverenga yemuno, nyika, uye yenyika mutero mitengo, kuvaka kunze kwekushambadzira michina, kubatanidza mutengesi wekutakura, uye kuunza yako logistics chikuva kutamisa chigadzirwa kubva pakutengesa kuenda kuendesa kwakatora mwedzi uye mazana ezviuru zvemadhora. Zvino, kuvhura saiti pane ecommerce
Isu tinogovana zvakati wandei nezve kutora asi hazvina kukwana nezvekuchengetwa kwevatengi. Matanho makuru ekushambadzira haasi akareruka sekutyaira more and more lead, ndezvezve kutyaira kwakakodzera mafambiro. Kuchengeta vatengi kunogara kuri chikamu chemutengo wekutora matsva. Nedenda, makambani akavhunduka pasi uye anga asiri ehasha pakuwana zvigadzirwa zvitsva nemasevhisi. Pamusoro pezvo, musangano we-mu-munhu wekutengesa uye misangano yekushambadzira zvakakanganisa zvakanyanya nzira dzekuwana kumakambani mazhinji.
Mapurogiramu makuru eruzhinji enhau anotanga nehukuru hwepfupi zvemukati zvaunogona kupururudza munzira dzako dzese uye uwane munhu wese kukambani yako kuti awedzere. Zviri nyore kuita kamwe, kaviri, kana katatu. Asi mazana nezviuru enguva? Ndipo panoburitswa huchenjeri hwehukama hwevanhu nguva pfupi yapfuura nekushandura chero zvemukati zvemukati kuita mapoka enhau enhau kukwirisa mapurogiramu ako enhau. Munguva pfupi yapfuura Yakagadzirwa Yemagariro Ehungwaru Platform Inosanganisira AI Zvemukati
Botco.ai: HIPAA-Inoenderana Kutaurirana Kwekutengesa Solution
China, May 6, 2021 China, May 6, 2021 Douglas Karr
Botco.ai's HIPAA-Inoenderana yekukurukurirana chikuva inoramba ichienderera mberi, ichiwedzera Contextual Chat Kushambadzira uye yepamusoro analytics dashibhodhi. Contextual Chat Kushambadzira inoita kuti vashambadzi vatange hurukuro dzakagadziriswa netarisiro uye vatengi zvichibva nekuti vakauya sei kuzoshanyira webhusaiti yekambani kana zvivakwa zvemidhiya. Iyo itsva analytics dhibhodhi inopa nzwisiso yakadzika mumibvunzo yevaenzi uye maitiro. Pamwe chete nekubatanidzwa kwaBotco.ai neemail, CRM, uye mamwe masisitimu ekushambadzira, Contextual Chat Marketing inounza nhanho yekuita munhu kukurukura.